किसान र कृषि नचिनेको नेपालमा कृषि व्यवसायिकरणको कुरा « Sansar News -->
किसान र कृषि नचिनेको नेपालमा कृषि व्यवसायिकरणको कुरा
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १४:२१
लोकप्रिय नाराको रुपमा कृषिको व्यवसायिकरण गर्ने भन्ने सरकारको संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यो कोरोना लकडाउनमा प्रत्यक्ष भोगेका छन् कृषकले । निर्माण कार्यमा खुकुलो छ, व्यापारमा खुकुलो छ, ढुवानीमा खुकुलो छ । तर जेठ असारको महिनामा कृषिमा प्रबन्ध हेर्नुपर्ने, कृषिकर्म गर्नु वा गराउनु पर्ने कृषिसँग जोडिएकाहरुको बेकारमा रमाइलो गर्न भिड गर्ने मान्छ सरकारको संयन्त्र ।
नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भयो यसलाई व्यवसायिक कृषि बनाउनु परेको छ भन्ने भनाई धेरैको निमित्त आकर्षक भएको छ । तर जमिन र कृषिकर्मसँग जोडिएकाहरु भने यस्ता चर्चाले थप त्रस्त हुनुपर्ने अवस्था भएको छ । धानको रुखको हाँगा कसरी छाँटने भनेर कृषकलाई सिकाउने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका घडानहरुले अब कुन आतंक मच्चाउने हुन भन्ने पिरोलो हुन्छ ।
असार पन्द्रको परंपरागत महत्वलाई ओझेल पार्दै घोषणा गरिएको ‘धान दिवस’ विगतका केही बर्षदेखि कृषक र कृषिकर्मको खिल्लि उडाउने दिवसको रुपमा परिणत हुँदैछ। चाहे रोपारसँग छिल्लिने मन्त्री हुन वा वातानुकुलित कार्यकक्षमा गमलामा रोपिने धान होस् । गालभरी जमरा जस्तो गरेर धानको बिउको माला लगाएर भाषण गर्ने देख्दा होस वा प्लास्टिकमा टेकेर धानको बिउ रोपेको कर्मकाण्ड देखाउने शरम पचेकाहरु हुन् सबैले कृषक र कृषि उत्पादनसँग जोडिएकाहरुको अपमान गरेका छन् ।
लोकप्रिय नाराको रुपमा कृषिको व्यवसायिकीकरण गर्ने भन्ने सरकारको संयन्त्रले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यो कोरोना लकडाउनमा प्रत्यक्ष भोगेका छन् कृषकले । निर्माण कार्यमा खुकुलो छ, व्यापारमा खुकुलो छ, ढुवानीमा खुकुलो छ । तर जेठ असारको महिनामा कृषिमा प्रबन्ध हेर्नुपर्ने, कृषिकर्म गर्नु वा गराउनु पर्ने कृषिसँग जोडिएकाहरुको बेकारमा रमाइलो गर्न भिड गर्ने मान्छ सरकारको संयन्त्र । अझ उ त किसान भनेको कछाड कसेको, ल्याप्चेछाप हान्ने अनि अधिकारीहरुसँग बोल्दा थुरथुर काम्ने हुन भन्ने अवधारणा बोकेर बसेको छ ।
कृषकको छोराछोरी, नातीनातिनी वा पनातीपनातिनी कोही होलान सरकार चलाउनेहरु सरकारी संयन्त्रका पुर्जाहरु अनि टाई कसेर विद्वान हुनेहरु । यी मध्ये कसैको पनि ध्यानमा आएको छैन कि कृषिकर्म निश्चित दिनहरुमा गरिसक्नु पर्छ नत्र मेहेनत लगानी सबै व्यर्थ हुन्छ । त्यसैले धानको रुख हुँदैन भन्ने कुरासम्म पनि सम्झाउनु पर्ने अवस्थामा छ, नेपालको कृषि । न किसान चिनेका छन् न कृषिकर्म अनि कोही भन्छन्– ‘सानो सुन्दर हुन्छ, त्यसैले एक हेक्टर एक परिवारलाई काफी हुन्छ ।
अर्को थरी भन्छन् सानो जग्गामा उत्पादन कम हुन्छ त्यसैले व्यवसायिक कृषिलाई ठूलो क्षेत्रफल चाहिन्छ । त्यो ठूलो क्षेत्रफल सम्हाल्न किसानले सक्दैन त्यसैले कि सरकार, कि सहकारी, कि उद्योगपति चाहिन्छ । व्यवसाय वा उद्योग भन्ने बित्तिकै त्यहाँ श्रम गर्ने मजदुर वा कर्मचारी मात्र हुन्नन भन्ने वास्तविकता स्विकार गर्न सक्दैनन ।
एक बिरामी उद्योग वा व्यवसायलाई सहायता गरेर खडा गर्न पर्छ भन्नेहरु बाँझो भएको जमिनलाई कुन कठिनाइले त्यो बाँझो भयो भनेर खोज्न र सहायता गर्न भन्दा त्यसलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने अपराधिक भन्न सकिने सोच राख्छन् । यस्ता सोच राख्नेहरुको तर्क हुने गर्दछ जमिन सम्पति हैन प्राकृतिक श्रोत हो । तर उनिहरुले भुलेको कुरा के हो भने भौगोलिक क्षेत्राधिकार प्राणीहरुको पहिलो सम्पत्ति हो ।
सबै प्राणी आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको भुगोलसँग जोडिएका हुन्छन, त्यसको भोगचलन गर्दछन् र त्यो अधिकारको रक्षा पनि गर्दछन् । यदि यो सत्य हैन भने वर्षमा आठ दस महिना जनशुन्य रहने इलाकामा अर्को मुलुकले दाबी गर्‌यो भनेर किन राष्ट्र उद्वेलित हुन्छ ?
यदि जग्गा जमिन प्राकृतिक श्रोतमात्र हो र त्यसमा कुनै किसिमको स्वामित्व श्रृजना हुन्न भने मुलुकहरुका सीमा हुने थिएनन् । सिमा रक्षाको निमित्त सपुतहरुले प्राण त्याग्दैन थिए । यो प्राणीको प्राथमिक स्वभाव हो कि यस्ता भौगोलिक क्षेत्राधिकार पहिले व्यक्ति त्यसपछि गाँउटोल अनि समाज र अन्तमा राष्ट्रको रुपमा प्रकट हुन्छ ।
कृषिलाई व्यवसायिक बनाउने इमान्दार सोच हो भने पहिले कृषिकर्ममा पनि व्यवसायमा हुने अवयवहरुको अस्तित्व स्विकार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निमित्त कृषकको पुरानो अवधारणाको परिभाषा बदलिनु पर्दछ । यसका पनि पुँजी हुन्छ, व्यवस्थापन हुन्छ, बजार अध्ययन हुन्छ, बिक्री कौशल हुन्छ अनि उत्पादनमा लाग्ने श्रम त हुने नै भयो । जबसम्म यी पुरा अवयवहरुलाई स्विकार नगरेर केवल उत्पादनलाई मात्र कृषि भनिन्छ त्यसले बाँडने भनेको गरिबी नै हो ।
अन्य सबै कुराको जिम्मा सरकार, सहकारी, उद्योगी आदिलाई दिएर उत्पादन मात्र कृषि हो भन्ने सोच लिने हो भने न कृषिको भलो हुन्छ न मुलुकको नै । तर नाराले समृद्धिको कुरा गरेर गरिबी बाँड्दा धेरैको राजनीति चम्केको छ । यदि गरिबी नै रहेन भने कुन भावना बेचेर सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्ने हो ? यदि यो कुरा हैन भने व्यवसायिक भनेपछि व्यवसायमा हुने सबै अंग मिलाएर मात्र व्यवसाय हुन्छ भन्ने चेत पलाउनै पर्छ ।
जापानबाट फर्किएर ५० करोड लगानीमा अंगुर खेतीदेखि वाइन…